मतदाता प्रभावित गर्न कम्बल वितरण, आचारसंहिता उल्लघंन गरेको भन्दै काँग्रेसको उजुरी | Rastra News
पोखरा, ३ मंसिर , नेपाली कांग्रेस कास्कीले कास्की क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत पोखरा–१५, पट्नेरी वस्तीका स्थानीयलाई कम्बल वितरण गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उक्त वडाका वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेलले पट्नेरीका १२ जनतालाई कम्बल वितरण गरेका थिए । वडाध्यक्ष पौडेलको यो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ को दफा ३ को उपदफा १ (ख) विरुद्ध हुने कास्की कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।
‘हतास मनस्थितिबाट गरिएको यस प्रकारको निन्दनीय कार्यशैलीलाई निर्वाचन कार्यालयले अनुगमन गरी आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्नेमाथि कार्वाही गर्न जोडदार माग गर्दछौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैबीच निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वडा कार्यालयले कम्वल वितरण गरेको भन्दै कास्की कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीले चुनाव प्रचार अभियान अन्तर्गत तेस्रो चरणका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
उम्मेदवारसहित हुने तेस्रो चरणका कार्यक्रम ५ दिनको हुने कांग्रेसले जनाएको छ । कार्यक्रम १२ गतेसम्म जारी रहने कास्की कांग्रेसले जनाएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत मंसिर ६ गते पोखरा–४ र ९ मा घरदैलो, ७ गते पोखरा–१६ मैदानमा चुनावीसभा, पोखरा–१५ मा घरदैलो, ९ गते पोखरा–११, १७ मा घरदैलो कार्यक्रम हुनेछ ।
यसैगरी मंसिर १० गते पोखरा–८ र पोखरा–२० मा घरदैलो, ११ गते पोखरा–२१ र ३३ मा घरदैलो कार्यक्रम हुने कास्की कांग्रेसले जनाएको छ ।
उनका अनुसार मंसिर ६ गते नै नेपाल तरुण दल कास्की क्षेत्र नं. २ ले मंसिर ६ गते चुनावीसभा आयोजना गरेको छ । पोखरा–७ स्थित राष्ट्रबैंकचोक रत्नचोकको बीचमा सडक डिभिजन कार्यालय अगाडि कार्यक्रम हुनेछ ।
सभालाई कांग्रेस नेताहरू गगन थापा, बालकृष्ण खाँड, डा. मिनेन्द्र रिजाल, तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत, उदय समशेर राणा, विद्वान गुरुङ लगायतले संवोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
कांग्रेसका ३ ‘राज’ एकैठाउँमा भेट हुँदा
जब पार्टीको केन्द्रीय तहमा उम्मेदवार छनोटमा सहमति जुट्न सकेको थिएन, त्यसबेला धनराजको नाम सर्वाधिक चर्चामा रह्यो कात्तिक २० गते दिउँसो २ बजेसम्म । सबै सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालले ‘धनराज कास्कीमा लड्ने’शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिरहेका थिए ।
सोही दिन २ बजे धनराज आफै पार्टीको बैठकमा पुगेर आफू कास्की नजाने जानकारी गराएपछि पार्टीका नेताहरू एकाएक खेमराजतर्फ मोडिए । त्यसपछि पार्टीका कोही पनि नेताहरू बोल्नै सकेनन् ।
उनीहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सबै जिम्मा लगाउँदै बैठक छाडे । त्यसपछि सभापति देउवाले खेमराजलाई टिकट दिएर पठाए ।
संयोगवस सोमबार चुनावी प्रचारको क्रममा यी तिनै जना नेताको एकैठाउँमा भेट भयो । भेट साविक भरतपोखरीको जिव्रेढुंगामा भएको थियो । भेटपछि तिनै जना नेताले एकअर्कामा अंकमाल गरे ।
यो चुनावमा प्रमुख दावेदार रहेका धनराज, देवराज र टिकट पाएका खेमराजको भेट हुँदा अन्य नेता कार्यकर्तामा खुशीको सीमा नै रहेन । उम्मेदवारको मुहारमा पनि औधी खुशी देखिन्थ्यो । नेता कार्यकर्ताहरू पनि खुशीले उफ्रिंदै कांग्रेसको पक्षमा चर्का नारा घन्काए ।
कोणसभामा धनराज र देवराजले खेमराजलाई सादगी, निष्ठावान, त्यागी, सन्त, सबैले सम्मान गर्न लायक व्यक्तित्व जस्ता
शब्दले प्रशंसा गरेका थिए । नेता धनराजले यत्तिका महान व्यक्तित्वलाई यो पटक जिताउन नसके इतिहासले धिक्कार्ने बताएका थिए ।
समितिको उपसंयोजकमा प्रेमलाल पुन रहेका छन् । यसैगरी सदस्यमा प्रमोद कोइराला, ढकबहादुर थापा, लक्ष्मण थापा, मनबहादुर विक, शितल अधिकारी, अब्दुलमजिद मिया, मीनबहादुर गुरुङ, सनबहादुर गुरुङ, दयाराज भण्डारी, माधव आचार्य र मीलन गुरुङ एनसी छन् ।
कास्की कांग्रेसको चुनाव प्रचार अभियान ११ वटै वडामा जारी छ । सबै वडामा घरदैलो र मतदाता भेटघाट कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टी सभापति कृष्ण केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पोखरा–३३ मा घरदैलो सकेर उम्मेदवार पौडलसहितको टोली पोखरा फर्किएर पोखराका विभिन्न वडामा घरदैलो गरिरहेका छन् ।
चुनावका लागि विभिन्न रणनीति बनाउन चुनावी कमाण्डर डा. मिनेन्द्र रिजाल पार्टी कार्यालयमा व्यस्त छन् । उनले पार्टीका नेताहरू, विभिन्न संगठनका प्रमुखहरूसंग छलफल गरिरहेका छन् ।
Previous articleमतदाताको आशा ‘खेमराज’, आचार्य भन्छिन्,‘नेता हुनु त खेमराज गुरु जस्तै हुनु’
Next articleकांग्रेसले जित्नुको विकल्प छैन ः डा. रिजाल
आज फेरि के होला ? यसो भन्छन् प्रहरी र व्यवसायी
ट्रम्पले गरे आफ्नैको निन्दा